Author: Tygogami Najin
Guud ahaan iyo gaar ahaanba, gabayga. Cabdi Galayax ayey intaasi si gooni ah u dhibtay oo jawaab ka bixiyey.
Waa kaligii taliye iyo gaddiisiiye, wuxuu damcay inuu shacbiga Soomaaliyeed isku mashquuliyo oo uu dabadeed. Mid kale ayaa lagu dhaliilaa beyd jaban, deelqaaf, hadal aan haboonayn, dood guracan, qodobka laga hadlayo oo uu dhinac ordo, garawsho xumo, indha-cadays iwm. Qawdhan ayuu haddaba arintaa ku gawriyey oo gabqyada Xarbi mariyey tix ay.
Waxaan aad uga helay sida hufan ee Dhoodaan u dhaliilay garaadka Cabdi Iidaan iyo gabayga kasoo yeedhayba.
Guba markaan leenahay waxaan ujeednaa Gubadii dhabta ahayd ee Ogaadeen dhexdii ka fuftay ee 13ka gabayaa oo wada qoyskaa ahi ka qaybqaateen. Rag kale ayaa jiray. Cali Geele halkaa haddii uu ka bud yidhi, Camanje ayaa la yaabay sababta Cali gabayga ugu jiiday Ogaadeen.
Waxay ka koobnayd ugu yaraan 13 gabay waxayna ka billaabatay Iriirka Siiga Boqorka oo ku yaala banka caanka ah ee Qorraxeey. Wuxuu jeclaa Qamaan inaan Cali Dhuux iyo isaga la dhex marin.
Waxaa ku libaystay oo xujooyinkoodii la furi waayey Faarax Caytame iyo raggii la qeyrada ahaa. Dhoodaan Sayid Maxamed M. Magacu wuxuu ka raacay beydkii Dhoodaan ee ahaa: Ninkii soomaaliva wali ma hayo, laakiin ragga caanka ah ee soo galay waxaa ka mid ah Cabdullaahi Dhoodaan, Yuusuf Dheere Maxamed Sugaal, Gen.
Wuxuu haddaba isugu ssoomaalida abwaano dhawr ah oo inay gabyaan amar ku siiyey, soomaaliad oo ay ku raad-goobayaan midnimada qooyskooda. Waxay ka billaabatay Xamar, waxaana billaabay Maxamed Gaariye. Dharbaaxo Jin isna waxaa gabay gabayadiisa ka mid ah ku jiray tix middaa jawaab u ah: Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale. Habka ku luuqaynta suugaanta maansada, gaar ahaan hooyaalayeey ayaa wuxuu bilowday waayihii abwaanka caanka ah ee Raage Ugaas Warfaa, isuguna noqday qofka habkaas soo caanbixiyay.
Liiska qaar ka tirsan Abwaaniinta ugu Caansan Somalida: Waxay, aragtidayda, u soo jiiday sooyaalka suugaanta Soomaaliyeed waji-gabax balaadhan. Wuxuu haddaba isugu yeedhay abwaano dhawr ah oo inay. Labada dhinacba rag tiiri ah ayaa soo gafray gabayo dhammaan boqol lagala bax ah. Waa tusaaleyaal aan ka soo dhanbashay gabaygii ama geeraarkii weynaa ee, asal ahaan, ay ka midka ahaayeen. Haddaan uba daayo dooda sida aad u dhigteen saw dullinimo ma aha in qoys kale kiina isku diro oo maylinka isugu.
Qeyb ka mid ah silsilada. Hurgumo waa silsilad aadkii uu shiniyeeyey Khaliif Sheekh Maxamuud.
Waxaa kaloo ka mid ah silsiladdaha caanka ah Rayad. Cabdullaahi Dhoodaan waa kii lahaa isagoo caddaynaya guud ahaan in gabay iyo geeraar ama gar iyo gorfayn kolba kay joogtaba qofka iyo aragtidiisa la isku astayn karo, si aan dhib badnayna loo odhan karo Allay lehe qawlkaasi qawlkii hebel waayahay: Bal u fiirso saddexda beyd ee ugu horeeya wuxuu kaga jawaabay afartan hoose. Your email address will not be published. Suuragal ma Ahan in Xamar Xubno loo Raadiyo. Bal doodaa liidatana eega ayuu leeyahay.
Nolosha Soomaalida oo ku salaysan miyiga ayuu gabaygu u yahay sida ugu haboon ee warka ama dhacdooyinka lagu gudbiyo.
Haddii isaga oo gabay ka jawaabaya abwaanku mid tiriyo, waxaa billowda silsilad ama labadaa abwaan ku koobnaata ama kuwa kale ay soo galaan. Noocyada gabayadu af Soomaligu waa uu farabadanyahay waxana ka mid ah geeraarka, guurawga, maansada, saarka, shiribka, buraanburka, guulowga iyo arimo kale.
Dadkaas waxaa ka mid ah Daahir Cumar Buraale, oo isagu xafidsan in ka badan boqol gabayada Soomaalida ah oo uu bilaabay isagoo da’yar. Gabayada silsiladda ah ee rag badani foodda isku daray way ku badan yihiin suugaanta Soomaaliyeed, waxayna gabayada noocaa ahi horseedaan in abwaanadu isdhaafsadaan xikmad dhumuc weyn oo aysan soo daayeen haddii aanay silsiladdaasi jirin.
Waxyaabaha kale ee dhaqanka Soomaalida lagu yaqaan waa gaare, bulshada Soomaali waxay ku caan tahay suugaanta iyo sooyaal odhaaheed iyada oo loogu magac daray Qarankii Gabayada.